April 2022 – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on करोडपति अंश बर्मा राप्रपामा प्रवेश
काठमाडौँ । टिकटकस्टार अंश बर्मा राप्रपा प्रवेश गरेका छन् ।
उनले भिमदत्त नगरपालिका बाट मेयरका उम्मेदवार गजेन्द्र बहादुर चन्द र उपमेयर हेलन श्रेष्ठलाई सहयोग गर्न अघि सरेका कारण उनी राप्रपाको लाइनमा देखिएको पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो समय उनी “हामी त्यहाँ पुग्नेछौ, जहाँ जरुरत छ” नारा लिएर विभिन्न अप्ठ्यारामा परेका मानिसहरुलाई सहयोगसमेत गर्दै हिंडेका छन् ।
टिकटकमा विभिन्न भिडियोहरु बनाएर आयआर्जन गरेर उनले काठमाडौँमा घरसमेत किनिसकेका छन् ।
भरतपुर मेयरमा बागी उम्मेदवार दिएका जगन्नाथ पौडेलले चुनाव चिन्ह ‘भुइँकटहर’ पाएका छन्।
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज चुनाव चिन्ह वितरण गरेको हो।
मेयरका उम्मेदवार पौडेललाई फकाउन गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले भरतपुर पठाएका थिए। तर उनीहरूले पौडेललाई फकाउन सकेनन्।
बागी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन भने पनि उनले नमानेपछि उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो।
त्यसैले अबको निर्वाचनमा पौडेलले भुइँकटहर चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्नेछन्।
भरतपुरमा माओवादी र काँग्रेसको साझा उम्मेदवारको रुपमा रेणु दाहाललाई अघि सारेपछि काँग्रेसमा विद्रोह गरेर पौडेलले स्वतन्त्र रुपमा नगर प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । चितवनका असन्तुष्ट काँग्रेसले उनलाई उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको थियो ।
पौडेलले भरतपुरस्थित विपी कोइरालको क्यान्सर अस्पतालमा रहेको विपी कोइरालको शालिकमा माल्यार्पण गरेर चुनावी प्रचार पनि शुरु गरेका छन् ।
अब महानगरका २९ वटै वडामा चुनाव प्रचारप्रसार अभियानलाई लगिने उनले बताए ।
प्रचार अभियान सुरु गर्दै नेता भीमबहादुर श्रेष्ठले कांग्रेस चितवनको भविष्य जोगाउन आफूहरुले पौडेलको अभियान थालेको बताए ।
No Comments on कठैबर – बृद्धाश्रममा सन्तान आउने दिन कुर्दाकुर्दै अस्ताइन ६८ वर्षीया चेतकुमारी बुढाथोकी,आमाको आत्माले शान्ति पाउन
घोराही। साउने झरीको एक साँझ। बृद्धाश्रमको परिसर। अपराहन्न करिब पाँच बजे उनले जीवनको अन्तिम सास फेरिन्। र, सधैका लागि अस्ताइन्।बुढेसकालमा जीवनको ओत खोज्दै तेरौंटेस्थित बृद्धाश्रममा आइपुगेकी ६९ वर्षीया चेतकुमारी बुढाथोकी असार १२ गते बृद्धाश्रममै बितिन्। उनी नौ महिनाअघि वृद्धाश्रममा पुगेकी थिइन्। आफ्ना चार सन्तान, आफन्त र माइतीले साथ छाडेपछि उनी एक्लो बनेकी थिइन्। र, जीवनको अन्तिम सहारा खोज्दै उनी बृद्धाश्रमको बाटो तताएकी थिइन्।
श्रीमतीले सोधिन् र’क्सी चु’रोट छोड्ने कि घर ? श्रीमानले लिए सबैलाई अचम्मित पार्ने निर्णय
No Comments on श्रीमतीले सोधिन् र’क्सी चु’रोट छोड्ने कि घर ? श्रीमानले लिए सबैलाई अचम्मित पार्ने निर्णय
एक चिनियाँ नागरिक बेइजिङ क्यापिटल इन्टरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनलमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएका छन् र आफ्नो परिवारमा फर्कने कुनै मनसाय छैन।
मेरो परिवारले मलाई घर बस्ने भए धु’म्रपा’न र म’द्यपा’न छोड्नुपर्छ भन्यो। यदि मैले त्यसो गर्न सकिन भने, मैले उनीहरूलाई मेरो सबै मासिक सरकारी तलब उनीहरुलाई दिनुपर्‍यो तर मेरो चु’रोट र र’क्सी कसरी किन्ने? त्यसैले घर नै छोडिदिए ।
एक ६० वर्षीय व्यक्ति पछिल्लो १४ वर्षदेखि विमानस्थलमा बसिरहेका छन् । उनले आफ्नो घर छोडिदिएका छन् । ती व्यक्तिका अनुसार उनलाई घरका सदस्यले रक्सी र चुरोट छोड्नका लागि भनेका थिए, त्यसैले उनले घर छोडेर विमानस्थलमा बस्न सुरु गरे ।
यी व्यक्ति चीनका हुन् । उनको नाम वेई जियानगुओ हो । जियानगुओले आफू घर फिर्ता नजाने बताएका छन् किनभने उनका अनुसार त्यहाँ उनका लागि स्वतन्त्रता नै छैन ।
यस्तै, जियानगुओ पछिल्लो १४ वर्षदेखि बेइजिङ इन्टरनेशनल एयरपोर्टको वेटिङ एरियामा बसिरहेका छन् । सुरुमा उनी केही दिन रेलवे स्टेशनमा पनि सुतेका थिए । जियानगुओका अनुसार विमानस्थलमा उनी आफ्नो मर्जीले खान पिउन सक्छन् । उनले चाइना डेलीसँगको कुराकानीमा घरमा आफूले मन लागेको कुरा गर्न नपाउने भएकोले उनी घर नफर्कने बताएका छन् ।
ती व्यक्तिका अनुसार उनकी श्रीमती र परिवारका सदस्यले उनलाई घरमा बस्नु छ भने र’क्सी र चु’रोट छोड्नुपर्ने शर्त राखेका थिए । यस्तोमा उनले घर नै छोड्ने निर्णय दिए । जियानगुओको घर विमानस्थलबाट करिब १९ किलोमिटर टाढा छ । उनले सन् २००८ मा घर छोडेका थिए ।
निर्वाचन आयोगद्धारा बालेन साहलाई लौरो चुनाव चिन्ह प्रदान
No Comments on निर्वाचन आयोगद्धारा बालेन साहलाई लौरो चुनाव चिन्ह प्रदान
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बालेन साहलाई लौरो चुनाव चिन्ह दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका साहले लौरो चुनाव चिन्ह पाउनु भएको हो ।
शनिवार आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह दिएको छ । यो सँगै अब साहको आधिकारिक चुनाव चिन्ह लौरो भएको छ ।
यसअघि सामाजिक सञ्जालमा उहाँको चुनाव चिन्ह खसीको टाउको भन्दै प्रचार गरिएको थियो । अहिले आएर सो जानकारी मिथ्या सूचना हो । चुनाव चिन्ह पाएसँगै साह लौरो चिन्ह लिएर चुनावी प्रचारमा निस्किनु भएको छ ।
अर्कोतिर पोखरा महानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार गनेस पौडेललाई लौरो चुनाव चिह्न दिइएको छ ।
आफूलाई अटेरी उम्मेदवार भनेर चिनाउने काठमाडौंका स्वतन्त्र उम्मेदवार शाह र पोखराका पौडेललाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लौरो चुनाव चिह्न दिएको हो ।
No Comments on कसरी बुझ्ने युवतीको ‘से क्स’ अपिल ?
साँच्चैभन्दा युवतीहरूको से- क्स अपिल बुझ्न निकै गाह्रो छ।
तर युवतीको से -क्स अपिल थाहा पाउनु धेरै फाइदा पुग्छ किनभने जुन केटी आफूलाई अति राम्री सम्झिन्छे, त्यसलाई एक नजर लगाइदियो भने उसको घ-मण्ड बढ्छ। त्यस्ती युवतीलाई छड्के आँखा पारेर खुट्टामा हेरिदियो भने ऊ स्वतः लज्जित हुन्छे।
पूर्व श्रीमतीको पत्र पढेर किन रोए.. आमिर खान ?
जून २००१ मा सार्वजनिक हिन्दी फिल्म ‘लगान’ निर्माण एवं प्रदर्शनमा आएको दुई दशक पूरा भएको छ ।
आशुतोष गोवारिकरको निर्देशनमा बनेको, आमिर खानले निर्माण गरेको यो फिल्मले भारतीय फिल्म इतिहासमा खास स्थान राख्छ । फिल्मको कथा, चरित्र, सेट, संवाददेखि गीतसम्म उत्कृष्ट मानिएको छ । उक्त फिल्म कसरी बनेको थियो ? ओस्कारसम्मको यात्रा कसरी तय भयो ? यस सन्दर्भमा आमिर खानले केही घतलाग्दा कुरा सुनाएका थिए ।
कति छिटै उनले यो कुरा बुझिन र यति ठूलो फिल्मको व्यवस्थापन गरिन् ।
मलाई थाहा छ कि, उनी एकदमै अनुशासनप्रिय निर्माता थिइन् । सबैलाई थर्काएर राख्थिन्, मलाई, आशुतोष, नुकल कामटे, अनिल मेहता सबैलाई । जब फिल्म पूरा भयो, तब रीनाले एक चिठी लेखिन्, पूरै टिमका लागि । त्यो चिठी पढेर म यति रोएँ कि, त्यो एकदमै इ-मोशनल चिठी थियो ।
No Comments on आमाको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर श्रद्धा भक्तिसाथ मनाइँदै
शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डित), आचार्य र पिताभन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभाशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइने शास्त्रीय परम्परा छ । छोराछोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नी आमालाई राम्राराम्रा लुगा लगाउने र मीठामीठा–तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ ।
सनातन वैदिक शास्त्रमा प्रत्येक नरनारीले जीवनमा देवऋण, मनुष्यऋण र पितृऋण तिर्नैपर्छ भनिएको छ ।
वैदिक सनातन धर्म ग्रन्थमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला एवं प्यार हुन् भनी आमा र जन्मभूमिको महत्व दर्शाइएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।
No Comments on प्रचण्डको एक फोनले बागीको उम्मेदवारी भयो फिर्ता
No Comments on के महिलाको शरिरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ? जान्नुहोस यस्तो छ यथार्थ….
No Comments on हेटौंडामा अबदेखि ट्राफिकले ‘लापसे’ चेक गर्ने, बाटोमै चालकको पिसाब जांच
मकवानपुर ट्राफिक प्रहरीले लागुपदार्थ सेवन (लापसे) गरि सवारी चलाउने चालकहरुको पहिचान गर्न ड्रग-युरिन टेस्ट सडक मैं सुरु गरेको छ ।
लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँने चालकको संख्या बढिरहेको गुनाँसो आएसँगै दुर्घटना समेत बढ्दा त्यसको नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ड्रग-युरिन टेस्ट जाँच सुरु गरेको हो ।
सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सवारी चालकहरुले लागु पदार्थ सेवन गरे नगरेको बारे जानकारी लिन ट्राफिक प्रहरीले सो चेकजाँच गरेको हो ।
लागुपदार्थ सेवन गरे नगरेको पिसाबको माध्यमबाट परीक्षण हुन्छ, ‘ड्रग डिटेक्ट किट’मार्फत परीक्षण आरम्भ भएको छ, ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक मुनेन्द्र थापाले बताए ।
उनले ठूला, साना सबै सवारी साधनका चालकहरुलाई परीक्षण गर्ने बताएका छन् ।
अब हेटौंडामा सवारी चलाउदा लागुपदार्थ सेवन गरेको छ छैन ट्राफिकले ‘ड्रग युनिट टेस्ट कीट’ले चालकहरुको पिसाब चेक गरि थाहा पाउनेछ ।
No Comments on कसरी हुन्छ विर्यदान र कति समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ, शुल्क कति लाग्छ ? (भिडियो)
पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको अण्डलाई निश्चित समयसम्म भण्डार गरेर आफूलाई सहज भएको बेलामा बच्चा जन्माउन कत्तिको सम्भव छ ?
सामान्यतया महिलाहरूले ३५ वर्षभन्दाअघि नै बच्चा जन्माउनु आमा र बच्चाको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर विभिन्न कारणले ३० वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउन अनुकुल भएन भने के गर्न सकिन्छ ?